Vince McMahon 'nanapa-kevitra ny hanohitra ny tompon-daka teo aloha rehefa nijery ny lalaony tato anatin'ny herinandro vitsivitsy - tatitra - Wwe
Vince McMahon dia tsy isalasalana fa ny teny farany raha ny amin'ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny WWE. Dave Meltzer an'ny Gazety mpanara-maso Wrestling nanambara fa nandritra ny lalao andrana vao haingana ho an'ny superstar NXT dia nanapa-kevitra hanohitra an'i Bronson Reed i Vince McMahon.
Nanao antso izy mba hamotsorana ireo superstar rehetra izay tsapany fa tsy handeha tsara amin'ny lisitra lehibe.
Ny tatitra dia nanambara ihany koa fa ny anarana malaza hafa toa an'i Bobby Fish, Mercedes Martinez ary Tyler Rust dia navotsotra ihany koa satria i Vince McMahon dia tsy nahita izay mety ho lisitra lisitra lehibe ao amin'izy ireo.
Bronson Reed dia Tompondakan'ny Amerika Latina-Amerikana teo aloha teo ary voalaza fa ho eo amin'ny radar amin'ny fiantsoana ny lisitra lehibe atsy ho atsy. Reed dia superstar herinaratra ary nahagaga azy ny famotsorana azy satria ny superstar Samoa Aostralianina dia toa kintana iray izay hahomby amin'ny lisitra lehibe noho ny habeny.
Dave Meltzer dia nanamarika ny fanapahan-kevitr'i Vince McMahon hanohitra an'i Reed taorian'ny nijereny ny lalaony tato anatin'ny herinandro vitsivitsy:
'' Ireo ao anatiny dia nilaza fa rehefa nahazo ny lalao andrana i Reed tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nanapa-kevitra hanohitra azy i McMahon ary nahatsapa izy fa raha tsy eo amin'ny lisitra lehibe izy, inona no ilaina hitazomana azy, '' hoy i Meltzer.
- JONAH (@bronsonreedwwe) 12 aogositra 2021
Inona no mety ho manaraka ho an'i Bronson Reed taorian'ny famoahana ny orinasan'i Vince McMahon?
Bronson Reed dia superstar manan-talenta ary tokony afaka hipetraka amin'ny tongony aorian'ny famotsorana azy WWE. Meltzer dia nilaza fa i Reed dia afaka miditra amin'ny fampiroboroboana lehibe ary afaka manamboatra akany ho azy.
'' Mpilalao iray ao amin'ny Impact, ary miaraka amin'i AEW, dia ho naka olona tsara izy fa ny fanontaniana dia olona firy no azon'ny AEW ampiana amin'ny lisitra iray izay tena tsy dia manana fotoana be amin'ny fahitalavitra be dia be ny talenta tsara be. hoy Meltzer.
Vao tsy ela akory izay i Bronson Reed dia nandefa lahatsoratra Twitter goavambe izay nitifitra ankolaka an'i AEW TNT Champion Miro. Ity dia mety ho famantarana iray fa liana ny handeha any AEW i Reed raha vantany vao tapitra ny fe-potoana 30 andro tsy hifaninanany amin'i WWE.
sign ex te hiverina hiaraka
manohana trompetra ve i mr biby
ny fomba fanaovana izay hahaliana anao kokoa
Dave meltzer naoty nxt fakana toerana vaovao orleans
antony hananana fanantenana amin'ny ho avy